काठमाडौं आसपासका ८ ‘हाइकिङ डेस्टिनेशन’ (भिडियो रिपोर्ट) « Lokpath
२०७७, १९ पुष आईतवार १९:०५
काठमाडौं आसपासका ८ ‘हाइकिङ डेस्टिनेशन’ (भिडियो रिपोर्ट)
प्रकाशित मिति : २०७७, १९ पुष आईतवार १९:०५
काठमाडौं– काठमाडौं अर्थात् एउटा व्यस्त सहर । सहरको भीडम्भीड ट्राफिक जाम जस्तै यहाँका अधिकांश वासिन्दा पनि निकै व्यस्त छन् । यहाँ कोही हातमुख जोर्न त कोही नयाँ अवसरका लागि दौडदौड गरिरहेका छन् ।
यहाँ कतिपयको जीवनशैली व्यस्त मात्रै होइन अस्तव्यस्त देखिन्छ । भनिन्छ, ‘व्यस्तताले सफलतालाई पछ्याउँछ ।’ तर, अस्तव्यस्तताले ? हो, अस्तव्यस्तताले उल्टै स्वास्थ्यलाई नै हानी गर्दछ ।
अस्तव्यस्त जीवनशैलीले मानिसको शारिरिक, मानसिक र संवेगात्मक संरचनालाई नै लथालिंग बनाइ दिन्छ । जव मानिसको शारिरिक, मानसिक र संवेगात्मक अवस्था नै खलबलिन्छ तव यसले उसको वृति विकासमा नै असर गर्छ ।
त्यसकारण स्वस्थ जीवनका लागि स्वस्थ्य जीवनशैली अत्यावश्यक कुरा हो । त्यसका लागि मनोरोञ्जन र घु्मफिरले ठूलो भूमिका खेल्दछ । व्यस्त दैनिकीबाट कहिलेकाहीँ धेरैलाई छुटकारा पाउन मन लाग्दो हो । एकछिनलाई भएपनि जीवन हलुका गरी बाँच्न मन लाग्दो हो । हप्तामा एकदिन हुने विदाको दिनलाई कम्तीमा भरपूर रमाइलो गर्दै बिताउन मन लाग्दो हो । परिवार र साथीभाइसँग मनोरञ्जन गर्दै मूडफ्रेसका साथ समय बिताउन मन लाग्दो हो ।
के तपाई पनि अस्तव्यस्त दैनिकीबाट मुक्त हुन चाहनु हुन्छ ? यदि यस्तै सोचिरहनु भएको छ भने तपाईको सोचलाई मध्यनजर गर्दै हामीले काठमाडौं नजिकका त्यस्ता केही स्थानहरुको सूची तयार पारेका छौं । जहाँ पुगेर तपाई एकदिनको विदा रमाइलो गरी बिताउन सक्नुहुन्छ ।
विशेष गरेर प्राकृतिक सुन्दरता, सांस्कृतिक सम्पदा, डाँडाकाँडा, वनपाखामा रम्न चाहनेहरुका लागि काठमाडौंमा वा नजिकै धेरै ठाउँहरु छन् जहाँ हाइकिङ गर्दै जान सकिन्छ । यस्ता ठाउँ जहाँ तपाई शहरको कृत्रिम झिलिमिली र नाइट क्लबको कानै खाने संगीतको छनकसमेत पाउनु हुने छैन । जुन शान्तिको खोजीमा भौतारिरहनुभएको छ, त्यही प्राप्त गर्नसक्नु हुनेछ ।
Tags: काठमाडौं, हाइकिङ्ग
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कोरोनाविरुद्दको १० लाख डोज खोप हस्तान्तरण गरिएको छ
नेपालमा कोरोनाविरुद्धको ५० लाख खोप आवश्यक, आज ल्याइयो १० लाख डोज (भिडियो)
काठमाडौँ– कोरोनाको १० लाख डोज खोप नेपाल आइपुगेको छ। भारत सरकारले नेपाललाई अनुदानस्वरुप
भारतले दिने १० लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप बिहीवार काठमाडौं आइपुग्ने (भिडियो)
काठमाडौं– भारत सरकारले नेपाललाई कोरोना विरुद्दको १० लाख डोज खोप अनुदानमा दिने भएको